नातागोताले खान्छन् जागिर : ३१ जोडी श्रीमान्-श्रीमती एउटै सरकारी कार्यालयमा » Nepal Fusion	Nepal Fusion	नातागोताले खान्छन् जागिर : ३१ जोडी श्रीमान्-श्रीमती एउटै सरकारी कार्यालयमा » Nepal Fusion
लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा महाधिवेशन नेकपा दुर्घटना दाङ गंगादेव गाँउपालिका कोरोना कांग्रेस ओली
२०७६ कार्तिक १६ गते शनिवार
यो कुनै गैरसरकारी संस्था वा निजी कम्पनीमा जागिर खाइरहेको समूह होइन । नागरिकले तिरेको करबाट तलब भत्ता बुझ्ने सानोठिमीस्थित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) भित्रको पारिवारिक जालो हो । सीटीईभीटीका तीन कर्मचारी संगठनका अध्यक्षका आफन्त हुन्, यी । अध्यक्षहरू मात्रै किन नि ? यहाँ पहुँचवाला कर्मचारी, निर्देशक र पूर्व सदस्य सचिवका आफन्त समेत ठूलो संख्यामा जागिरे छन् ।
वर्तमान संविधान अनुसार त लोकसेवा आयोगको संलग्नता विना सरकारी कर्मचारी छनोट हुनै सक्दैनन् । तर, यसअघि घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर सीटीईभीटीमा कार्यरत कर्मचारी र राजनीतिज्ञले आफन्तलाई जागिरमा छिराएका छन् । यसका लागि शुरूमा करारमा नियुक्ति गरेर त्यसपछि सीमित आन्तरिक प्रतियोगितामार्फत उनीहरूलाई स्थायी गरिन्थ्यो । लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइराला भन्छन्, “यसअघि सम्बन्धित संस्थाले नै छनोट गथ्र्यो । वर्तमान संविधान जारी भएपछि हामीले हेर्न थालेका हौं । अब लिखित परीक्षा हामी लिन्छौं, अन्तर्वार्ता मात्रै उनीहरूले गर्छन् ।”
३१ जोडी श्रीमान् श्रीमती
सीटीईभीटीमा हाल कार्यरत ९३२ कर्मचारीमध्ये १३० भन्दा बढी कर्मचारी एक अर्को परिवारका सदस्य मात्रै छन् । श्रीमान् श्रीमती मात्रै ३१ जोडी छन् । यसमा निर्देशक तहका कर्मचारी समेत छन् । पूर्व सदस्य सचिव रामहरि लामिछानेकी श्रीमती संगीता लामिछाने अहिले पनि सीटीईभीटीमै जागिरे छन् । रामहरि भने सदस्य सचिवबाट राजीनामा दिएर कोलोम्बो प्लान स्टाफ कलेज (सीपीएससी) फिलिपिन्सको महानिर्देशक पदमा छन् । “मैले श्रीमतीलाई जागिर लगाइदिनु प¥यो भनेर कसैलाई गुहारेर खुवाएको होइन, दुर्गममा सरुवा गरेपछि व्यवस्थापनले नै श्रीमतीलाई पनि जागिर दिएर पठाएको हो” उनले भने, “म पदमा हुँदा श्रीमतीलाई जागिर खुवाएको होइन ।”
कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशी (२०४८–२०५१) शिक्षामन्त्री हुँदा सीटीईभीटीलाई कार्यकर्ता र आफन्त भर्तिकेन्द्र बनाएका थिए । उनी मन्त्री हुँदा गोरखाका सरोज देवकोटा सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष थिए । “त्यतिबेला उनीहरूले एकैपटक ५०० जनालाई जागिर खुवाए” सीटीईभीटीका पूर्व निर्देशक एवं शिक्षाविद् टंकनाथ शर्मा भन्छन्, “सीटीईभीटीमा प्राविधिक पृष्ठभूमि भएका कर्मचारी आवश्यक पथ्र्यो । उनीहरूले साधारणतर्फका कर्मचारीले भरे ।” त्यसबेला जागिरमा छिरेकाहरू सबैजसो जोशीका कार्यकर्ता, नाता र देवकोटाका आफन्त छन् ।
त्यहाँ एउटै परिवारका सदस्यको बाक्लो उपस्थिति देखाउने धेरै उदाहरण छन् । कुनै बेला सदस्य सचिव भएका देवकोटा खलकको उदाहरण हेरौं । जिता–६ लमजुङकी रजनी देवकोटा २१ असार २०५३ मा यहाँ जागिर प्रवेश गरिन् । उनी अहिले प्रशासनिक अधिकृत छन् । उनका भाइ शंकर न्यौपाने सीटीईभीटीमै जागिरे छन् । देवर पालुङटार–५ गोरखाका रामहरि देवकोटा १४ साउन २०५४ देखि सीटीईभीटीमा जागिरे छन् । उनीहरूमध्ये रामहरि सीटीईभीटी पोलिटेक्निकमा उपनिर्देशक छन् । रजनी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) मा प्रशासकीय अधिकृत छन् । शंकर स्कूल अफ हेल्थ साइन्स भरतपुरमा छन् । उनीहरू बाहेक पनि यहाँ देवकोटा परिवारका नाता पर्ने अरू धेरै कर्मचारी छन् ।
नेपाली कांग्रेस समर्थक कर्मचारी संघका महासचिव शंकरदेव कोइराला, भतिज कुमार कोइराला, भतिजी प्रमिला र भतिजी ज्वाईं शालिकराम डाँगी यहींका जागिरे हुन् । सेती प्राविधिक शिक्षालय दिपायलका कामु प्रिन्सिपल शालिकरामका साढुभाइ होमनाथ अधिकारी रत्नकुमार बान्तवा पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्यूट, इलामका प्रिन्सिपल हुन् । कुमारका दाइ विष्णु कोइरालाले ‘नक्कली सर्टिफिकेट काण्ड’ लागेपछि जागिर छोडे । उनीहरूमध्ये विष्णु सबैभन्दा पहिला सीटीईभीटी प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि भाइ कुमार २५ असार २०६३ मा प्रवेश गरे । आमोदप्रसाद उपाध्याय शिक्षामन्त्री हुँदा अस्थायी कर्मचारी निष्कासन गर्दा कुमार पनि परे । त्यसपछि २०६३ सालमा पुनः जागिर प्रवेश गरे । शालिकराम २०६७ मा स्थायी भए । उनकी श्रीमती प्रमिलालाई २९ साउन २०७२ मा स्थायी गरियो ।
लेखा अधिकृत कृष्णबहादुर खड्काका श्रीमती र सालीले पनि यहाँ जागिर खाइरहेका छन् । खड्का २०५३ मा जागिर प्रवेश गरेका थिए र २०६५ मा स्थायी भए । उनकी श्रीमती बिनु २०५६ मा जागिर प्रवेश गरेर २०६५ मा स्थायी भइन् । खड्काले साली इनुलाई पनि सरकारी सेवामा प्रवेश गराए । इनु २०७२ कात्तिकमा स्थायी भइन् ।
पूर्व क्षेत्रीय निर्देशक दीपक नेपाली क्षेत्रीका सीटीईभीटीमा पाँच जना आफन्त छन् । दीपक भन्दा अघि नै उनकी श्रीमती उषाले सीटीईभीटीमा जागिर खाइसकेकी थिइन् । उषाले २४ मंसीर २०५३ मा जागिर प्रवेश गरेकी हुन् । उषाको भाइ केशव मिश्र र बुहारी सरस्वती मिश्र पनि सीटीईभीटीमै जागिरे छन् । केशवले २०४५ मा सीटीईभीटी प्रवेश गरेका थिए भने उनले श्रीमती सरस्वतीलाई २०६१ मा सेवा प्रवेश गराएका थिए ।
लेखा अधिकृत दिनेश लुइँटेलकी श्रीमती सपना न्यौपाने, बहिनी विद्या शर्मा, ज्वाईं प्रमोद पौडेल र काका तारा लुइँटेल सीटीईभीटीमा जागिरे छन् । उनीहरूमध्ये तारा सबैभन्दा पहिला १९ असार २०४१ मा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । त्यसपछि दिनेश २ पुस २०५३ मा जागिर प्रवेश गरे । उनकी श्रीमती सपना १ साउन २०७३ मा यहाँको जागिरे भइन् । दिनेशका ज्वाईं प्रमोद पनि २०५३ मै यहाँ प्रवेश गरेका हुन् ।
पाठ्यक्रम निर्देशक दीपक पौडेलका परिवारका सदस्य पनि सीटीईभीटीमा छन् । ५ असार २०४९ मा जागिर प्रवेश गरेका पौडेलकी बहिनी र ज्वाईं यहाँ छन् । ज्वाईं वरिष्ठ लेखा अधिकृत उमेशप्रसाद खरेल २०५३ असारमा यहाँ प्रवेश गरेका हुन् भने बहिनीले त्यही वर्ष जेठमा जागिर शुरू गरेकी हुन् ।
परिवारको जालो बनाउने अर्का व्यक्ति टैलेन्द्र आचार्य पनि हुन् । ३० असार २०५४ मा जागिर प्रवेश गरेका टैलेन्द्रले आफन्तलाई राम्रै जागिर खुवाएका छन् । उनको भाइ प्रकाश आचार्य, भतिज भरत आचार्य, बहिनी हरिकला आचार्य र ज्वाईं खेम पोखरेल २८ असोज २०६६ देखि यहाँ जागिर खाइरहेका छन् । भतिज प्रकाश आचार्य पनि ४ पुस २०६५ देखि यहाँ जागिरे छन् ।
सीटीईभीटीबाट सहजै सूचना नपाएपछि हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर यो विवरण लिएका हौं । हामीले अहिलेसम्म फेला पारेको तथ्यांकमा यहाँ ३१ जोडी त श्रीमान् श्रीमती मात्रै छन् । ज्वाईं–जेठान चार जना, दाजु–भाइ २४ जना, बाबु–छोरा आठ जना, बहिनी–ज्वाईं चार जना छन् । त्यस्तै भतिजी र ज्वाईं दुई जना, साढुदाइ साढुभाइ आठ जना, साला÷साली भिनाजु ६ जना, देवर भाउजू दुई जना, काका भतिज दुई जना र दिदी–भाइ चार जना छन् ।
वरिष्ठ लेखा अधिकृत प्रमोदभक्त आचार्य सीटीईभीटीको नीति निर्धारण शाखामा छन् । उनकी श्रीमती गीता ढुंगाना प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (टीआईटीआई) मा छन् । केही महीना अघिसम्म प्रमोद पनि टीआईटीआईमै प्रशासनिक प्रमुख पदमा थिए । अर्का वरिष्ठ लेखा अधिकृत टीकानिधि खनाल सीप विकास परियोजनामा छन् भने श्रीमती शोभा खनाल सीटीईभीटी (इन्स्योर प्रोजेक्ट) मा छन् ।
अर्का वरिष्ठ लेखा अधिकृत उमेश खरेल सीप परीक्षणमा छन् भने उनकी श्रीमती मीना खरेल टीआईटीआईमा छन् । प्रशासकीय अधिकृत विमल ढकाल कानून शाखामा छन् भने उनकी श्रीमती सीमाकुमारी श्रेष्ठ टीआईटीआईमा छन् । प्रकाशकीय अधिकृत शैलेन्द्र पण्डित पनिकामा छन् भने उनकी श्रीमती चन्द्रकला पौडेल राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिमा छन् ।
कर्मचारी संघका अध्यक्ष देवदत्त बडु सूचना तथा अनुसन्धान महाशाखामा छन् भने उनकी श्रीमती पशुपति जोेशी सीप विकास परियोजनामा छन् । प्रशासकीय अधिकृत केशवलाल श्रेष्ठ तालिम महाशाखामा छन् भने उनकी श्रीमती मीनाकुमारी श्रेष्ठ पनिकामा छन् । ठाकुर भट्टराई र दुर्गा चापागाई दुवै जना पनिकामै छन् । खेमराम गौतम आन्तरिक लेखा परीक्षणमा र उनकी श्रीमती माया गौतम राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिमा छन् ।
निर्देशक जीवनारायण काफ्ले स्तर निर्धारण महाशाखा प्रमुख हुन् भने दाइ रमाकान्त काफ्ले प्रशासन महाशाखामा छन् । जीवनारायण स्तर निर्धारण महाशाखामा सरुवा भएपछि रमाकान्तलाई प्रशासनमा लगिएको हो । यी दुई महाशाखा वल्लोपल्लो कोठामा पर्छन् ।
सीटीईभीटीको स्तर, राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति, परीक्षा, सीप विकास परियोजना, इन्स्योर परियोजना, टीआईटीआईको जागिर आकर्षक मानिन्छ । परीक्षामा हुनेले ५० प्रतिशत भत्ता पनि पाउँछन् । समितिमा गएको वर्षसम्म अधिकृत तहका कर्मचारीले करीब एक लाख रुपैयाँ बोनस पाएका थिए । स्तर निर्धारण महाशाखा सम्बन्धन दिने मामिलामा आर्थिक चलखेल हुने ठाउँको रूपमा चिनिन्छ । सीप विकास र इन्स्योर दाताको लगानीमा चलेको परियोजना हो । दुवैमा अनुगमनमा जाने र विदेश भम्रण गर्ने अवसर हुन्छ ।
यहाँ एमालेको कर्मचारी संगठन, कांग्रेसको संघ र माओवादीको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन सक्रिय छन् । उनीहरू कर्मचारीको हकहित भनेर आफन्तलाई जागिर खुवाउन सक्रिय छन् भन्ने तथ्यहरूले नै देखाउँछन् ।
संगठन अध्यक्ष नागेन्द्र साहका भाइ वीरेन्द्र, बुहारी इन्द्रिका र भान्जी कविता सीटीईभीटीमै छन् । संगठनकै उपाध्यक्ष ठाकुर भट्टराईकी श्रीमती दुर्गा चापागाई, उपमहासचिव किशोरचन्द्र शर्माकी श्रीमती सुष्मा वाग्ले, संगठनका महासचिव ईश्वरी देवकोटाकी श्रीमती निर्मला गिरी देवकोटा, पूर्व उपाध्यक्ष सूर्य अधिकारीकी साली कल्पना जिरेल यहाँकै कर्मचारी हुन् ।
नेपाली कांग्रेस समर्थक कर्मचारी संघका अध्यक्ष देवदत्त बडुकी श्रीमती पशुपति जोशी, संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकिशोरलाल कर्णका तीन भाइ र छोरी अर्चना यहीं छन् । संघकै उपाध्यक्ष यदु पुडासैनीका छोरा सुरेन्द्र पुडासैनी जागिरे छन् । संघको उपाध्यक्ष रजनी देवकोटाका भाइ शंकर न्यौपाने जागिरे छन् । न्यौपाने त संघको केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् ।
महासचिव शंकरदेव कोइराला, उनका काका, भतिज, भतिजी र ज्वाईं यहीं जागिरे छन् । संघको पूर्व अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र घिमिरेकी श्रीमती विनिता घिमिरे पनि सीटीईभीटीमै छन् । पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवसिंह धामीकी श्रीमती विष्णुदेवी धामी यहीं छन् । धामी सीप विकास परियोजना र विष्णु सेती प्राविधिक शिक्षालयमा छन् ।
माओवादीको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन पूर्व अध्यक्षका तीन भाई यहीं कार्यरत छन् । पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारा लुइँटेलका भतिजा दिनेश लुइँटेल र भतिजी बुहारी सपना यहीं जागिर खान्छन् । लुइँटेलकी भतिजी विद्या शर्मा र ज्वाईं प्रमोद सीटीईभीटीमै जागिरे छन् ।
पूर्व सदस्य सचिव जयबहादुर टण्डनले आफ्ना भतिजहरू कृष्णलाई ७ कात्तिक २०६७ मा र दीपकलाई २०६८ मंसीरमा करारमा नियुक्ति दिलाए । २०७२ मा उनीहरू स्थायी भए ।
सीटीईभीटीमा यतिविघ्न मनपरी हुन थालेपछि अख्तियारले हेर्ला भन्ने आश राख्नु स्वाभाविकै हो । तर, यहाँ त अनियमितता ढाकछोप गर्न मिलेमतोमा अख्तियारका कर्मचारीले पनि लाभ उठाएर आफन्तलाई जागिर खुवाएको भेटियो ।
सीटीईभीटीले प्रक्रिया पूरा नगरी फारवेष्ट टेक्निकल कलेज धनगढी, रम्भादेवी टेक्निकल कलेज बुटवल, भ्याली कलेज अफ इन्जिनियरिङ नयाँबानेश्वर र सेन्ट्रल इन्जिनियरिङ कलेज बालकुमारी ललितपुरलाई १७ वैशाख २०६७ को १०७आंै बैठकले २०६७÷६८ का लागि तीनवर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले १ भदौ २०६७ मा यो विषयमा अनियमितता भएको भनेर छानबिन गर्न समिति बनायो ।
स्वीकृति दिंदा आर्थिक चलखेल भएको प्रतिवेदन समितिले बुझायो । यस बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन थाल्यो । तर, आयोगले थप अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढाएन । उल्टो फाइल तामेलीमा राखिदियो । केही समयभित्रै अनुसन्धान अधिकृत सुवास पण्डितकी श्रीमती सीटीईभीटीमा जागिरे भइन् । हलवार–२ दाङकी सरस्वती शर्माले १८ चैत २०६७ मा सीटीईभीटीमा करार सेवामा जागिर पाइन् र २६ साउन २०७२ मा उनी स्थायी पनि भइन् । अहिले उनी टेक्निकल एजुकेसन इन कम्युनिटी स्कूल (टेक्स) महाशाखामा कार्यरत छन् ।
हाल अवकाश जीवन विताइरहेका पण्डितले आफूले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन फाइल उठाए पनि अरूले गर्दा तामेलीमा गएको स्वीकार गरे । तपाईंकी श्रीमती सरस्वतीलाई सीटीईभीटीले जागिर दिएपछि फाइल तामेली राख्नुभएको हो भन्ने प्रश्नमा पण्डितले भने, “म त मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ । पछि साथीहरूले तामेलीमा राख्नुभएको हो ।”
सीटीईभीटीमा बारम्बार ताला लगाउने र विरोध गर्ने विद्यार्थी नेता काभ्रेका प्रदेश सांसद रत्न ढकालकी श्रीमती त्यहींकी जागिरे छन् । ढकाल क्रान्तिकारीका सीटीईभीटी संयोजक भएका बेला श्रीमती मेनुका घिमिरेले यहाँ जागिर पाएकी हुन् । त्यस्तै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङकी श्रीमती दुर्गा भट्राई सीटीइभीटीको साँखु स्थिर शंकरापुर पोलिटेटेक्निकमा कार्यरत छिन् । नेविसंघका पूर्व उपाध्यक्ष गणेश भट्टकी श्रीमती कलावती भट्ट सीटीईभीटीमै जागिरे छन् । एकजना निर्देशकका भनाइमा, “यहाँ चर्को विरोध गर्नेको मुख बन्द गर्न पनि उसको आफन्तलाई जागिर खुवाउने चलन छ ।”
शिक्षा मन्त्री सीटीईभीटीको अध्यक्ष हुन्छ । त्यसैले जो शिक्षामन्त्री हुन्छ, उसले आफन्त र कार्यकर्ता यहाँ पठाउँछ । यस कार्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले राखेका आफन्तहरू मन्त्रीको समेत स्वार्थमा राखिएका हुन् । सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको पीएका आफन्त निशा मिश्रलाई १ भदौ २०६६ मा जागिर खुवाए । उनी अहिले सूचना तथा अनुसन्धान महाशाखामा छन् । चित्रलेखा यादव शिक्षामन्त्री हुँदा पनि धेरैलाई करारमा नियुक्ति दिइएको थियो ।
‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अमर्यादित काम’
सीटीईभीटी सीमित परिवारको स्वार्थका लागि बनेको पारिवारिक क्लब जस्तो देखिन्छ । “संस्थाले जे सेवा दिनुपर्ने हो त्यो गर्न नसक्नु यही कारण हो” शिक्षाविद् टंकनाथ शर्मा भन्छन्, “संस्थालाई प्राविधिक जनशक्ति ७५ प्रतिशत चाहिनेमा साधारण शिक्षा लिएका ७५ प्रतिशत छन् ।”
विज्ञहरूका भनाइमा, साधारण जनशक्तिको बाहुल्य भएपछि यसले आफ्नो विशेषज्ञ क्षमता देखाउन सकेन, निजी क्षेत्रलाई सम्बन्धन दिने र परीक्षा लिने संस्थाको रूपमा विकास भयो । शर्मा भन्छन्, “गरीब, विपन्न भौगोलिक रूपमा पिछडिएका जनतालाई सहज रूपमा शिक्षा दिन बिर्सनुको कारण नै पारिवारिक जालो र अप्राविधिक जनशक्तिको भीड हो ।”
सुविधाभोगी प्रवृत्ति यसको अर्को देख्न सकिने असर हो । पूर्व सदस्य सचिव रामहरि लामिछाने भन्छन्, “यस्ता कर्मचारी सधैं फाइदा मात्रै खोज्ने स्वभावका हुन्छन् ।” उनी भन्छन्, “आफन्त हुने कर्मचारीहरू राम्रो ठाउँमा सरुवा, विदाको बेला पनि काज खोज्ने खालका हुन्छन् । भनेकै ठाउँमा सरुवा चाहिन्छ उनीहरूलाई ।” उनको भनाइमा व्यवस्थापक सधंै यस्ता कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्यामा हुन्छन् ।
“गोप्य राख्नुपर्ने कतिपय विषय परिवारका सदस्य हुँदै अघि बाहिर पुग्छ, रोक्नै सकिन्न ।” लामिछाने भन्छन्, “श्रीमतीलाई बढुवा नगरेको भनेर लोग्नेले मलाई नै ‘थ्रेट’ गरे । आफन्तलाई भनेको ठाउँमा सरुवा नगरेको भनेर एकजना त ६ महीनासम्म बोलेनन् ।”
नातावादको हैरानी भोग्नेमा पूर्व सदस्य सचिव निरबहादुर जिरेल पनि एक हुन् । जिरेल भन्छन्, “सीटीईभीटीमा परिवारको जालो छ । यसको असर नियमित सेवा प्रभावमा समेत पर्ने गरेको छ । काम लगाउनै सकिन्न ।” उनी व्यवस्थापनमा हुँदा कर्मचारी सरुवा गर्दा थरीथरीका समस्या आइलागेका थिए । जिरेल भन्छन्, “कुनै कर्मचारी खास विषयमा विज्ञ हुन्छ । त्यसको आधारमा उसलाई सरुवा गर्नुप¥यो भने उनलाई मात्रै पठाएर हुँदैन । मानवीय हिसाबले श्रीमान् श्रीमती नै पठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।”
अरू पनि समस्या आउँछन् । जिरेल भन्छन्, पदपूर्तिको बेला श्रीमान्को बढुवा भयो, श्रीमतीको भएन । दाइको भयो, भाइको भएन । भिनाजुको भयो भने सालीको हुँदैन । अनि लफडा गर्छन्” जिरेल भन्छन्, “काम लगाउँदा झन् समस्या पर्छ ।”
जनताको करबाट चल्ने सरकारी निकायमा यस्तो मनपरी कसरी हुनसक्छ ? उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहाल भन्छन्, “योग्यता र क्षमताको आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने संविधान कानूनको उद्देश्य हो । कुनै पनि निकायले परिवारका सदस्यलाई जागिर खुवाएको छ भने त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अर्मादित कार्य हो ।”
तुलसीपुरमा १९४८ मत गणना गर्दा एमाले अगाडी, कसको कति मत ? [सुचीसहित]
रोल्पा नगरपालिकामा माओवादीको अग्रता, कसको मत कति ?
गंगादेव गाउपालिका रोल्पामा २८०० मत गणना हुदा कांग्रेसको अग्रता कायमै कसको कति मत ? [सुचीसहित]
अपडेट: गंगादेव २ मा ४ सय मत गणना हुँदा कसले कति मत पाए ? [सुचीसहित]
नेपाली कांग्रेस रोल्पाले छान्यो पालिका उम्मेदवार (सूची सहित)
रोल्पा कांग्रेसको निर्णय : ५० प्रतिशत हिस्सा नदिए एक्लै चुनाव लड्ने
चुनावमा पराजित भएपछि इन्चार्ज पदबाट राजिनामा
माओवादीको प्रभावक्षेत्र मानिने राेल्पाकाे गंगादेवमा काङ्ग्रेसको सानदार जित, माओवादीको लज्जास्पद हार
गंगादेव गाउपालिका रोल्पामा कांग्रेसलाई पछि पार्दै एमालेको अग्रता कसको कति मत ? [सुचीसहित]